Xildhibaanada oo codka kalsoonida siiyay Xukuumadda R/Wasaare Rooble – AfmoNews
Xildhibaanada Golaha Shacabka Somaliya ayaa codka kalsoonida si buuxda u siiyay golah Cusub ee Wasiirada Somaliya, kadib markii maanta la horgeeyay.
Kulankan oo ay soo xaadireen illaa 188 mudane ayaa waxaa guddoomiyey afhayeenka baarlamaanka, Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyada oo ay dhinac fadhiyeen guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo xigeenka labaad ee golaha shacabka.
Ugu horreyn ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble aya khubad ka jeediyey kulanka, wuxuuna ka dalbaday xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya inay codka kalsoonida ah siiyaan xukuumadiisa, si ay gudato waajibaadka shaqo ee loo igmaday.
Intaasi kadib ayaa la guda galay in Xukuumadda Kalsoonida loo waydiiyo Golaha Shacabka, waxaana codka kalsoonida siiyay dhamaan Xildhibaanadii madasha fadhiyay.
R/Wasaare Rooble ayaa ka mahadceliyay kalsoonida la siiyay xukuumadiisa, waxaana intaasi kadib goobta lagu dhaariyay Golaha Wasiirada cusub ee Somaliya.